DEG-DEG: Barcelona Iyo Ernesto Valverde Oo Heshiis Kusoo Afjaray Mugdigii Kaga Jiray Mustaqbalkooda - GOOL24.NET
DEG-DEG: Barcelona Iyo Ernesto Valverde Oo Heshiis Kusoo Afjaray Mugdigii Kaga Jiray Mustaqbalkooda
Kooxda Barcelona ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis cusub ku abaal marisay tababaraha kooxdeeda kowaad ee Ernesto Valverde kaas oo tan iyo xili ciyaareedkan mustaqbalkiisa mugdi la galinayay isla markaana shirar jaraa’id oo badan lagu soo waydiiyay haddii uu kooxda ka baxayo ama uu heshiis cusub saxiixayo.
Ernesto Valverde ayaa saxiixay heshiis Camp Nou ku sii hayn kara ilaa xili ciyaareedka 2019/2020, waxaana sidoo kale heshiiskan qayb ka ah in uu haysto doorasho uu kooxda kula sii joogi karo ilaa xili ciyaareedka 2020/2021 waxayna hadda Barcelona meesha ka saartay wararkii suuqa ee sheegayay in Valverde uu dhamaadka xili ciyaareedkan baxayo.
Heshiiska uu Ernesto Valverde ku joogay Camp Nou ayaa dhacayay dhamaadka xili ciyaareedkan, waxayna maamulka Barcelona go’aan ku gaadheen in ay ku sii dhegsanaadaan Ernesto Valverde oo gabi ahaanba meesha ka saaray khilaafkii iyo xaaladii qolka labiska Barcelona.
Ernesto Valverde ayaa xidhiidh cajiib ah la leh Lionel Messi iyo xidigaha ugu waa wayn Barcelona waana sabab uu kooxda waqti dheer ku sii joogayo mana jiro wax khilaaf ah oo Valverde iyo Lionel Messi soo kala dhex galay muddadii uu Camp Nou soo maamulayay.
War saxaafadeed ay hadda Barcelona soo saartay ayaa lagu yidhi: “Kooxda kubbada cagta Barcelona iyo Ernesto Valverde oo ah tababaraha kooxda kowaad waxay heshiis ku gaadheen hordhinta heshiiskii labada dhinac u dhexeeyay oo hal xili ciyaareed oo kale lagu kordhiyay (2019/2010) oo uu doorasho u haysto hal xili ciyaareed oo dheeraad ah (2020/21)”.
Kadib xaflada heshiis kordhinta Valverde ayaa qoraalka looga hadlay: “Saxiixa kordhintu waxa uu qabsoomi doonaa Jimcaha February 15 marka ay saacadu tahay 10.15am CET oo ka dhici doona Camp Nou.”.
Ernesto Valverde ayaa saxaafada ka soo hor muuqan doona ka hor kulanka Real Valladolid ee sabtida Camp Nou ka qabsoomi doona waxaana la filayaa in saxaafadu ay su’aalo ka waydiin doonto heshiiskiisa cusub ee uu Barca ku sii joogayo.
Valverde ayaa tan iyo markii uu Barcelona soo gaadhay waxa uu noqday tababare ixtiraam wayn ka helay ciyaartoyda kooxdiisa, shaqaalaha tababarka, maamulka sare iyo xataa saxaafada guud ee dalka Spain oo ay ku jiraan wargaysyada Madrid ugu caansan ee hore ay Luis Enrique colaada wayni u soo dhex martay.
Guud ahaan Valverde waxa uu Barcelona soo maamulay 96 kulan oo rasmi ah wuxuuna la soo guulaystay 65 halka 22 kulan ay barbaro soo gashay Barca waxayna soo dha dhamiyeen 9 guuldaro oo kaliya iyada oo waliba 43 kulan oo ka mid ah 65 ka guulood ay ahaayeen horyaalka La Liga.